I-25 yothando lwesini kunye namabinzana othando - Okunye
I-25 yothando lwesini kunye namabinzana othando
Uthando phakathi kwabantu ababini, nokuba ngabesini esifanayo okanye esahlukileyo, lubonakaliswe ngamagama lunokuba mnandi, lube yimibongo, okanye lube bubukrelekrele. Ngelixa izibini ezithandanayo zinokufumana inkuthazo nakweyiphi naamazwi othandoLe mizekelo ibandakanya imeko eyodwa yobudlelwane besini esifanayo.
Ukusuka kumntu ukuya emntwini
Ukuba ufuna ukuxelela umntu wakho ukuba umthanda kangakanani,la mabinzanabanokunceda. Zisebenzise njengoko zinjalo kwizicatshulwa kunyenothandookanye ukongeza ukuchukumisa kwakho.
Eyona nto ibalulekileyo endinokuyenza kukuphosa konke ukulumkisa emoyeni kwaye ndikuthande.
Umbutho uthi amadoda akufuneki abonise uvakalelo okanye athandane, kodwa uthando lwam kuwe alunakubakho.
Vumela iingalo zam zothando zikwamkele ngonaphakade nangamandla onke omntu.
Ukuqhelana kwam ngokwesondo kubonisa kuphela uthando lwam kumntu, wena.
Isitabane yinto engaphantsi, into endiyiva kuwe luthando!
25 amabinzana othando kubudlelwane bakho obutsha
Imibongo yothando engama-8 kulwalamano olude
Amabinzana othando aseFrance
Ukususela kumfazi ukuya kumfazi
Uthando phakathi kwabafazi ababini lukhethekile kwaye lukhethekile njengalo naluphi na olunye ulwalamano. Nceda intombi yakho okanye umfazi wakho abone ukuba uthetha ukuthini kuwe ngezi ngcebiso zinengcinga.
Amandla omfazi + umfazi = uthando olungenasiphelo.
Khange ndithandane nawe, uthando lwakho lundityhalele ukuba ndenze lonto.
Abasetyhini bazalelwe ukuthanda nokukhathalela abanye, ke olu thando lwalumiselwe kwasekuqaleni.
Ukuchukumisa okuthambileyo ngekhe kwazi, njengothando lomfazi, njengothando lwakho lokucinezela umphefumlo wam.
Ukusuka kumfazi ukuya emfazini, ukusuka entliziyweni kuye entliziyweni, akukho mandla anamandla ngokwaneleyo okwahlula uthando lwethu.
Njengabo bonke abantu abazingcayo ngokuba bangoobani, izibini ezithandanayo zingabonisa ukuzingca kuthando lwabo ngamagama anamandla anje ngala.
indlela yokujongana namalungu osapho angenanto
Abanye bathi ukuthanda ukuthanda kwakho akulunganga, kodwa ndiyakuthanda kuba uziva ulungile.
Olu thando sisabelana ngalo luyinyani, nokuba abanye abakwazi ukumelana nalo.
Uthando lwethu ludlula inzondo kuba ungumlingane wam womphefumlo.
Ndinebhongo ngokuba ndikuthanda ngelixa uthando lwakho luphembelela ukuzingca kwam.
Uthando olufana nolwam lugcinelwe (indoda okanye umfazi) njengawe kuba akukho mntu wumbi ulifaneleyo.
Ubomi buzele zizinketho, ukuthanda wena ayisiyiyo enye, andinagunya lokwenza oko.
Amaqabane ahlala kwizixeko ezahlukileyo, athi, okanye amazwe axhomekeke kunxibelelwano ukugcina uthando lwabo lomelele. Yazisa iqabane lakho ukuba uziva njaniimiyalezo yamandlamalunga neemvakalelo zakho.
Ndingathanda ukuphambukisa yonke imingcelele yekratshi kuwe kwaye ndizise lonke uthando lwam kuwe ngohlobo lombhiyozo omkhulu.
Ndilinde ixesha elide ukukuthanda ngokuvulekileyo, ndingakulinda ngonaphakade ukukubamba kwakhona.
Kudala kwafuneka ndikuthande ndikude ngoba umhlaba wawuthi awunamveliso, ngoku ndikuthanda kufutshane okanye kude kuba uthando lwam kulapho ukhoyo.
Ihlabathi lisenokuba liqhuba isikhewu phakathi kwethu, kodwa lishukumisa uthando lwethu ukubambelela.
Uthando lwam lunjengomnyama apho isiphelo siqala khona entliziyweni yam kwaye elinye likhokelela kubuncwane obukuwe.
Ukuba la mabinzana awasebenzi kwiimfuno zakho, jonga iikowuti zothando ezivela kwezinye iinkcubeko, ezinje ngeengcaphuno zothando zaseFrance, okanye ufumane ugqozi kwizicaphuno zothando ezivela kubantu abadumileyo kwimbali.
Ngaba iintlanzi ze-betta zifuna ukukhanya
Inkokeli yokucinga uGqirha DaShanne Stokes uthi, 'Amandla othando kukuba abone bonke abantu.'
Umdlali odumileyo uPoy Boy uGeorge wakhe wathi: 'Kukho inkohliso yokuba amafanasini abelana ngesondo kwaye abantu besini esahlukileyo bayathandana.' Yinyani leyo. Wonke umntu ufuna ukuthandwa '.
Awuthandani nohlobo olo. Uthandana naloo mntu 'sisicatshulwa esithandwayo esingaziwayo esisetyenziswa kwiimemes.
Njengoko uMongameli uBarack Obama esitsho emva kwetyala leNkundla ePhakamileyo ngomtshato wesini esinye, 'uthando luthando.'
Fumana iikowuti ezikhuthazayo malunga nothando kunye neqhayiya lewebhu kwi Abahlali Y into evanithi ngokuthambile phakathi kwezinye.
Uthando yimvakalelo enezinto ezininzi apho abantu bafuna ukuhambisa umyalezo othile ngokubonisa nokuthetha iimvakalelo zabo. Nceda iqabane lakho liqonde ukomelela kunyeubunzulu bothando lwakhongeengcaphuno kunye namabinzana othando.
Ukukhempisha, Hikinging, Backpacking Gear And Equipment Imisebenzi Yolutsha Horoscopes Slideshows Uhambo Igadi Tools
Inja yam ayizukuhlala ebusuku
iikowuti malunga nokukhumbula umntu owaswelekayo
indlela yokuthetha emnxebeni
imidlalo efana iinyaniso ezimbini kunye nobuxoki
Amagama amnandi ukuwathetha kwintombi